Ubuntu Cinnamon dia misy amin'ny kinova fitsapana voalohany | Ubunlog
Te hanandrana ny Ubuntu Kanelina ve ianao? Misy izao ny kinova ahafahantsika mahita ny zavatra iasan'izy ireo
Elaela izay mamoaka izahay ny lahatsoratra voalohany momba Kanelina Ubuntu eto amin'ny Ubunlog. Tetikasa iray izay mandray ny dingana voalohany, saingy misy ny indikasi izay mahatonga antsika hieritreritra fa ho lasa tsiro ofisialy laharana faha-9 amin'ny fianakavian Ubuntu. Tsy ho fifaninanana izany na hamongorana ny Linux Mint, fa ho safidy mahaliana indrindra izay heverin'ny maro fa tokony ho tonga haingana. Tsy mbola misy daty famotsorana ho an'ny kinova miorina, fa ny sary voalohany dia efa navoaka izay ahafahantsika mahita izay iasan'izy ireo.
Saingy alohan'ny hanohizanao ity lahatsoratra ity na hanome ny rohy fampidinana dia misy zavatra vitsivitsy tsy tokony ho adino: kinova fitsapana io, izay ahafahantsika mifandray voalohany, fa tsy soso-kevitra mihitsy ny hametraka azy amin'ny fitaovana famokarana. Ny lehiben'ny tetikasa izay fantatra ankehitriny amin'ny anarana hoe Ubuntu Cinnamon Remix na ny Cinnamon Remix fotsiny dia manoro hevitra ny hizaha ny sary amin'ny masinina virtoaly, satria tsy miasa ho azy ireo araka ny tokony ho izy ny EFI.
Andramo izao ny kanelina Ubuntu ao anaty boaty GNOME
Raha hazavaina etsy ambony, ny rohy hampidinana ny Ubuntu Cinnamon ISO voalohany dia East. Toy ny kinova Ubuntu Daily Build, ny lanjan'ny sary ankehitriny dia mihoatra ny 2GB, izay tsy tokony ho olana satria mila mampiasa azy amin'ny milina virtoaly isika. Ho ahy manokana, isaky ny mila manandrana distro toa an'ity Cinnamon Remix ity aho, dia manoro hevitra aho ny hanao izany GNOME Boxes. Na dia mety manome olana bebe kokoa noho ny VirtualBox amin'ny rafitra fiasa toa an'i Kubuntu aza izy, ny fahita indrindra dia ny fanatanterahana ny fitsapana eo noho eo, satria tsy ho hita eo am-baravarankely kely toy ny ao amin'ny rindrambaiko Oracle malaza io.
Ary inona no ho hitantsika raha manandrana ny Ubuntu Cinnamon ISO voalohany isika? Hoy aho hoe: fifandraisana voalohany ahitantsika ny Ubuntu misy takelaka ambany toa ny Linux Mint, ny logo Ubuntu Cinnamon ary ny lohahevitra sy ny fampiharana nofinidin'ny tetikasa, toa ny LibreOffice 6.3.2, Firefox 70, Rhythmbox na GIMP. Ho fanampin'izay, misy ny vaovao avy amin'i Eoan Ermine, toy ny kernel Linux 5.3. Ny tena mahavariana dia ny fivezivezeny somary milamina na eo aza ny fampandehanana azy amin'ny milina virtoaly, ary tsy zavatra azontsika lazaina momba ny rafitra fiasa rehetra izany.
Tsy misy isalasalana, ny fomba tsara indrindra hahalala izay misy ny ISO amin'izao fotoana izao dia ny fampidinana azy io ary hizaha toetra azy (amin'ny milina virtoaly, mitandrema), fa mamela anao haka sary vitsivitsy izahay.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: ubunlog » dabilio » Birao hafa » Te hanandrana ny Ubuntu Kanelina ve ianao? Misy izao ny kinova ahafahantsika mahita ny zavatra iasan'izy ireo
Sintomy mora foana ny rakitra ao amin'ny terminal Ubuntu
Linux 5.4-rc5 dia tonga lehibe kokoa noho ny mahazatra taorian'ny famoahana kely kokoa